dhaawacyada-ciidanka-itoobiya-oo-diyaarado-looga-daabulay-deegaanka-halgan | Baydhabo Online
Meydadka askarta Itoobiya looga dilay Halgan, ayaa waxaa la qorshaynaya in dalkooda loo qaado, si halkaasi aas loogu sameeyo. Waxaa adag in macluumaad sax ah laga helo tirada askarta Itoobiyanka ihi ee dagaalkaasi lagu dilay. Warar madax bannaan waxay xaqiijinayan in Itoobiyanka laga dilay in ka badan 25 askari
Sheekh C/casiis Abuu Muscab, Afhayeenka Ciidamada Ururka Al Shabaab, ayaa sheegay dagaalkan in ay ku dileen in ka badan 60 askari oo ka tirsan Ciidanka Militariga Itoobiya, sida uu yiri.
Afhayeenka, ayaa sheegay in Ciidanka Itoobiya uu khasaaraha xoogiisu ka soo gaaray qarax ismiidaamin ah, oo mid ka mid ah dagaal-yahanada Shabaabku uu kula beegsaday albaabka hore ee xerada.
Dagaalkan, ayaa ka dambeeyay markii aroornimadii hore ee Khamiistii ay Shabaabku weerar ku bilowday is qarxin ku qaadeen fariisimaha Ciidanka Itoobiya ee qaybta ka ah Amisom, ay ku leeyihiin Halgan.
Gudoomiye Ku Xigeenka Dhinaca Amniga ee Maamulka Gobolka Hiiraan, Maxamed Ibraahim C/laahi, ayaa waxaa uu dagaalkan ku sheegay noociisii ugu xooganaa, oo labada dhinac ku dhex mara Gobolkaasi.